Horudhac: Leicester City vs Arsenal… (Rikoorrada u gaarka ah kulankan oo u xaglinaya The Foxes) – Gool FM
(Leicester) 28 Feb 2021. Kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa soo dhoweyneysa galabta naadiga Arsenal kulan ka tirsan horyaalka English Premier League.
Leicester ayaa dareemeysa culeys gaar ah ciyaartan maadaama aysan heli doonin kubbad sameeyahooda muhiimka ah ee James Maddison.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 3:00 Galabnimo xilliga geeska Afrika.
Leicester City ayaanan heli doonin laacibka khadka dhexe ka ciyaara ee James Maddison kaasoo dhaawac sinta ah ku seegay ciyaartii ay guuldarrada la kulmeen ee tartanka Europa League.
Kelechi Iheanacho oo kulankaas isaguna ganaax kaga maqnaa ayay dib u heli doontaa kooxda Leicester, balse waxaa ka maqnaan doona Ayoze Perez, Wesley Fofana, Wes Morgan, James Justin iyo Dennis Praet oo dhammaantood dhaawacyo qaba.
Aubameyang ayaa kaliya hal ka mid ah 18-kiisii gool ee ugu dambeeyay Premier League kusoo dhaliyay meel ka baxsan magaalada London, waxaana uu ahaa rigoore oo uu Manchester United kaga soo dhaliyay garoonka Old Trafford.
Bukayo Saka oo 19 jir ah ayaa noqon kara ciyaaryhanka labaad ee ugu da’da yar kaasoo 50 kulan oo Premier League ah u safta Arsenal, waxaana kaga dhaqsiyo badnaa kaliya Cesc Farbregas.